Muungaab oo wafdi reer Switzerland ah geeyey degmada Hiliwaa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muungaab oo wafdi reer Switzerland ah geeyey degmada Hiliwaa
Muqdisho – Mareeg.com: Wafdi ka socda dalka Switzerlnad ayaa booqasho ku tegay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waxeyna la kulmeen gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Muungaab.
Guddoomiye Muungaab ayaa maanta xafiiskiisa kusoo dhaweeyey duqa magaaalada Baden ee dalka Switzerland, kaas hogaaminayay wafdi heer Caalami ah oo maanta Muqdisho soo gaaray.
Duqa magaalada Baden ee dalka Switzerland, Geri Muller iyo xubaha la socday ayaa markii ay soo gaareen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Benaadir, Xildhibaanno, iyo xubno kale.
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir Xasan Muungaab ayaa wefdiga ku soo dhaweeyay xarunta cusub ee uu maamulka gobolka ka hirgeliyay degmada Heliwaa, halkaasi oo ay ku qaateen kulan ay uga wada hadleen arrimo badan oo ay ka midtahay xoojinta xiriirka saaxiibtinimo iyo sidii ay gacan uga geysan lahaayeen dib u dhiska dalka gaar ahaan tan caasimadda.
Duqa magaalada Baden ee dalka Switzerland Geri Muller ayaa ka mahad celiyey sida Xushmada leh ee loogu soo dhaweeyey caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, isagoo cadeeyey in kaalin qiimo leh ay ka qaadan doonaan horumarinta Soomaaliya, islamarkaana ay u tahay farxad, maadaama markii ugu horeysay uu booqasho ku yimaado Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho
“Maamulka Gobolka Benaadir waxa uu ku talaabsaday horumar aad u sareysa, runtii muuqaal wanaagsan ayaa ii muuqda oo aan arkay, anaguna way naga go’antahay in aan xoojino sida aan ku wada shaqeyn karno” ayuu yiri Mr Geri Muller.
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna Duqa Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muungaab ayaa talaabo horumar leh ku tilmaamay booqashada ay maanta Muqdisho ku yimaadeen wafdiga ka socda dalka Switzerland, ee uu hogaaminayo Duqa magaalada Baden ee Dalka Switzerland Geri Muller.